को हुन् यी सुन्दरी ? के उनले एक रातमै पाकिस्तानी सरकार ढाल्न सक्छिन् ? – Jagaran Nepal
पाकिस्तानकी टिकटक स्टार हरीम शाह एक पटक फेरि चर्चामा छिन् ।
हरीम शाहले पाकिस्तानको संघीय अनुसन्धान एजेन्सी (एफआइए)ले आफ्ना पतिलाई झुटो आरोप लगाएर दुःख दिइरहेको आरोप लगाएकी छिन् । गत महिना हरीम शाहको एउटा भिडियो भाइरल भएको थियो । भिडियोमा उनले ब्रिटिश पाउण्डका नोटका मुठाहरु पाकिस्तान सरकारको खिल्ली उडाइरहेकी थिइन् ।
हरीम शाहले एक टेलिभिजन कार्यक्रमका क्रममा पाकिस्तानका मन्त्री शेख रशीललाई फोन गरिदिएकी थिइन् । तबिश हाशमीको शोमा कुराकानीका क्रममा शेख रशीदको चर्चा भएपछि हरीम शाहले तत्काल मोवाइल उठाएर पाकिस्तानका गृहमन्त्रीलाई फोन गरेकी थिइन् । गृहमन्त्री शेख रशीदले त्यतिबेला हरीम शाहलाई पनि फोन गर्न भनेका थिए ।
हरीम शाहले २ वर्ष पहिले शेख रशीदमाथि अ श्लिल भिडियो पठाएको आरोप लगाएकी थिइन् । यो आरोप लगाउँदै उनले शेख रशीदको एउटा भिडियो शेयर गरेकी थिइन् । हरीमले शेयर गरेको भिडियोमा शेख रशीदले भनेका थिए ‘मेरो कुरा राम्रोसँग सुन्नुस् । मैले तपाइँको कुनै पनि रहस्य दुनियाँको अगाडि खोलेको छैन । तैपति तपाइँले मसँग कुराकानी किन बन्द गर्नुभयो ? त्यसपछि रशीदले भन्छन् ‘हरीम तिमीलाई जे गर्नु छ त्यो गर ।’
पाकिस्तानका नामी र पहुँचवाला सत्ताका खेलाडीहरुसँग उनको सिधा पहुँच छ । खासगरी इमरान खान प्रधानमन्त्री भएपछि हरीम शाहको पहुँच तीब्र रुपमा बढेको छ ।